Portable 2 1 ipl shr iinwele nokususwa umatshini njengoko-100plus-Iinwele nokususwa umatshini-Hunan Astiland Zonyango Aesthetics Iteknoloji Co., Ltd.
Umatshini ophathwayo we-2 kwi-1 ipl shr yokukhupha iinwele njenge-100plus
Itekhnoloji ye-SHR yenza ukuba ukuqhubekeka nokudityaniswa okwenziwe ngesikwere nangamandla e-peak apheleleyo kuyo yonke ipulse, kwiziphumo ezifanelekileyo, ezikhuselekileyo. Ubushushu bokutsalwa kwe-SHR kusasazwa ngokulinganayo, ukuhambisa amandla amakhulu ngexesha elifutshane, eliqhubekayo lokuqhuba kwephuli.
Ukukhanya okunyanzelisiweyo kokukhanya kweTekhnoloji ye-SHR kukwaphula unyango olunokulungisa iimeko ezahlukeneyo zesikhumba ezingalunganga njengokungafezeki kolusu ebusweni, iimpawu zokwaluphala, uphawu lokuzalwa, iinwele ezingafunekiyo, i-veins ezincinci ezingabonakaliyo kunye nezinye iziphene. Inika isisombululo esikhuselekileyo, esingahlaseliyo esinokulungiswa kwimeko yakho nganye kunye nodidi lolusu, ukubonelela ngeziphumo eziphezulu zokucoceka kunye nokwaneliseka okubalaseleyo.
Ukususwa kwethambo, ukususwa kwethambo elibomvu
Ukuvuselelwa kwesikhumba Amabala okususwa
Esona sisibane sikhulu se-xenon esetyenzisiweyo, qinisekisa isibhamu esiyi-200,000
Isixhobo seekristale yesafire, qinisekisa ukuveliswa kwamandla aphakamileyo kunye -4 ℃ nokuphola konxibelelwano
Icebo lokucoca faka uyilo olusebenzayo, olusebenzayo
Amandla aphakamileyo e-IPL angama-2000W, afanelekileyo kukususwa kombala wombala okhanyayo
Inkqubo yokuphola ephezulu iqinisekisa ukuba kusebenza ixesha elide kunye namava angcono onyango
Uyilo lwesixhobo sokudibanisa ngesandla, ukutshintshwa ngokulula
Inkqubo yolawulo lomntu eyenziwe lula ekulula ukuyisebenzisa:
Iitekhnoloji ze-IPL-SHR 2, ukuhlangabezana nemikhwa eyahlukeneyo yokusebenza
Ukukhetha iilwimi ezi-7
Ukuseta okuzenzekelayo ngombala wolusu, umbala weenwele, ukuxinana kweenwele
Ukuhamba kwamanzi kunye nobushushu bamanzi ukujonga kunye nesilumkiso, hlukana nokujonga inqanaba lamanzi
Inketho yesayizi ye-Spot: 15mm * 50mm, 8mm * 40mm
Uyilo lwe compact, isixhobo sokunxibelelanisa esisemgangathweni ophezulu osetyenzisiweyo
Amaxesha ama-3-5 ngokukhawuleza kune-IPL yendabuko
Nge-wavelength 420-950nm inika izigulana amava akhululekileyo
Ukuqhubekeka nokudityaniswa okwenziwe sisikwere ngamandla e-peak apheleleyo kuyo yonke ipulse, kuba
iziphumo ezifanelekileyo, ezikhuselekileyo
Isuti yazo zonke iintlobo zolusu kunye neenwele
Ukuphindaphinda ukusetyenziswa kobushushu obuphantsi bokukhupha-ukususa imvakalelo yentlungu
(Ukhetho 560/690 / 755-1200nm)
Isiqwenga esi-1 kunye neefilitha ezi-5
I-15mm * 50mm (8mm * 40mm ngokhetho)
I-10-50J / CM2
Uhlobo lomatshini (L * W * H)
Umatshini ophathwayo wokuhambisa iinwele osusa i-808 nm ngokusisigxina we-diode laser as-800p